यसरी गर्नुपर्छ दाँतमा ब्रस, जान्नुहाेस्र - ज्ञानविज्ञान
सफा चम्किलो र स्वस्थ दाँतले मानिसको व्यक्तित्व झल्काउछ । शरीरका अन्य भागको स्वास्थ्यमा तपाईँले जति ध्यान दिनुहुन्छ त्यति नै ध्यान दाँत र गिजाको स्वास्थ्यमा पनि दिनुपर्छ ।
दाँतको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिदा दाँत र गिजामा समस्या त हुन्छ नै यसको अलावा मुटु, मिर्गौला तथा केही मात्रामा क्यान्सर रोगको समेत जोखिम बढ्छ । यस्तो महत्वपूर्ण दाँतको सफाई चाँही कसरी गर्ने हो त ? आउनुस हेरौँ डेन प्लानले सिकाएको छ तरिका
१. ब्रसको टाउकोलाई दाँतमा राखी त्यसलाई करिब ४५ डिग्रीको झुकाब दिएर गोलाकार रुपमा चलाई सबै दाँतको सतहहरु सफा गर्नुस् ।
२. तल र माथिका दाँतहरुको बाहिरी सतहमा ब्रसलाई तलमाथि गर्दै चलाएर सफा गर्नुस् ।
३. तल र माथिका दाँतहरुको भित्री सतहमा पनि ब्रसलाई राम्ररी चलाई सफा गर्नुस् ।
४. दाँचको चपाउने सतह अर्थात तल र माथिका दाँतका टुप्पोमा राम्ररी सफा गर्नुस् ।
५. दाँतको भित्री सतह सफा गर्न ब्रसलाई ठाडो पारेर गोलाकार रुपमा चलाई ब्रस गर्नुस् ।
६. ब्रस गर्दा ज्रिबोमा समेत गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्नाले मुखको व्याक्टेरिया हटाई मुखको दुर्गन्धहटने वा सास ताजा गर्न मद्धत मिल्छ ।
नजिक गएर बोल्न सक्नुहुन्न । किनभने दाँतको दुर्गन्ध थाहा पाउँछ कि भनेर ।यदी दाँत सफा, चम्किलो र मिलेको हुँदो हो त, तपाईं निर्धक्कसाथ हाँस्नुहुन्थ्यो । तर, दाँत नै खराब भएपछि हाँस्नु पनि गाह्रो ।
निश्चय पनि खानेकुरा राम्ररी चपाउन सकिदैन । त्यसमाथि दाँतको किटाणु खानामै मिसिने भयो । अब रोगमाथि रोग थपिएन त ?त्यसैले दाँतको सुरक्षा र सफाईसँग हामी बढी सजग हुनुपर्छ ।
अक्सर हामी बिहान र बेलुकी खाना खान्छौं । खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ । अन्य बेला पनि खानेकुरा खाइसकेपछि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। यी त सामान्य कुरा हुन् । तर, हामीलाई यति सामान्य कुरा गर्न पनि कति झन्झट ?
बजारमा थरीथरीका ब्रस पाइन्छ, टु्थपेस्ट पाइन्छ । घरमै बनाएर पनि पेस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ । नुन, बेसार र थोरै तेल मिश्रण गरेर त्यसले दाँत सफा गर्दा राम्रो हुन्छ ।अब कुरा गरौ, दाँत चम्किलो बनाउने । यो घरेलु विधी हो ।
यस बारे पनि जान्नुहास्ः
Don't Miss it सावधान ! यसकारण खस्छ महिलाकाे पाठेघर र यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ, जान्नुहाेस्
Up Next खुसी र सुखि सधैभरि कसरी हुने ? ? जान्नुहाेस्